Apple inotora chikamu musangano inosimudzira mutemo wekuunganidzwa kwesimba | Ndinobva mac
Apple inotora chikamu musangano inosimudzira mutemo wekuunganidzwa kwesimba
Apple Solar Simba Farm
Mavhiki apfuura takadzidza kuti Apple ndeimwe yeiyo makambani akabatanidzwa zvakanyanya nharaunda . Pakati pemabasa ainoita pane iyo kugadzirwa kwesimba muminda yezuva kana emagetsi ezuva pamusoro pamatenga emafekitori ayo pasi rese.
Asi simba rine zuva rekupera, kureva kuti, rinogona kudyiwa, kuunganidzwa kana kurasikirwa. Parizvino, mutemo une chekuita nekuunganidzwa kwesimba hauna kunyatso kuvandudzwa uye kunyangwe kushoma kuitira kuti ugone kuunganidzwa kuti uendeswe kune imwe nharaunda kana kunyange imwe nyika. Asi mubatanidzwa unozivikanwa se Yepamberi Energy Energy Economy uye muridzi weApple, inoda kubvisa zvipingaidzo izvi.
Musangano iri mune vanhu vakawanda vemarudzi akawanda izvo zvakakumikidzwa mukugadzirwa kwezvinhu zvakasiyana, kubva kumotokari, michina yekumaindasitiri, kana zvigadzirwa zvemagetsi. Tiri kutaura nezve makambani akadai se: Johnson Kudzora, Schneider Electric, GE, AES uye masimba makuru: SunPower uye First Solar. Ese makambani aya anoenderana zvakanyanya nesimba kugadzira zvigadzirwa.
MuUnited States, mutemo unodzorwa ne Federal Energy Regulation Commission uye izvi zvakatonga kuti zvave kutokwanisika kubhadharisa mabhatiri kubva kune yemagetsi grid uye kuwana purofiti kune yakawandisa isina kudyiwa nemugadziri. Izvi zvichaita kuti simba riwedzere mari uye risatambise, sezvo zvichizokwanisika kuunganidza kuti ishandiswe gare gare uye kunyange kuendesa simba kumafekitori ari kure nenzvimbo kubva pakugadzirwa kwesimba.
Izvo zvinangwa nesangano Yepamberi Energy Energy Economy umo Apple inotora chikamu kuziva mutemo chaiwo wechiito ichi, kuitira kuti vakwanise kuita zvirongwa zvavo zvemagetsi pasirese.
Ngatirangarirei iyo Apple bheti yakasimba iyi 2017 akati wandei emagetsi mapurojekiti, achiratidza mashandiro akatanga muChina neruoko rwe Ndarama uye kugadzirwa kwekambani inotsigira yesimba manejimendi senge Apple Simba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple inotora chikamu musangano inosimudzira mutemo wekuunganidzwa kwesimba
Iyo nyowani Apple Watch Series 3 zvakare yeiyi 2017
Chechitatu chinoteedzana kugadzirisa kweMusoro Basketball, yeMac